Sen. Menendez oo bayaan kasoo saaray is-mari waaga doorashada Soomaaliya |
Sen. Menendez oo bayaan kasoo saaray is-mari waaga doorashada Soomaaliya
Guddoomiyaha gudidga arrimaha dibedda Senate-ka Mareykanka ayaa bayaan kasoo saaray wax uu ugu yeeray “xasaradaha doorasho ee kasii daraya” ee Soomaaliya kadib markii muddo xileedka madaxweyne Farmaajo uu dhacay ayada oo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey.
Bob Menendez, oo ah Dimoqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey, ayaa sheegay inuu aad uga argagaxay xasaradahan iyo halista dhabta ah ee dhiig daata, oo ka dhasha is-mari waaga siyaasadeed ee iminka.
“Is-mari waaga hadda jira ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo, hoggaamiyayaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu helis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay tobankii sano ee tegay ee shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasadda iyo dhaqaalaha,” ayuu yiri Menendez.
Waxa uu intaas ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka.
“Aniga oo garowsan in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa’iideysan karto qaska siyaasadeed, si ay u ballaariso olololeeha argagixiso, waxaan ugu baaqaya dhammaan dhinacyada inay deg deg u u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shakhsiga ah ayna xaliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka,” ayuu yiri Senator Menendez.
Waxa uu intaas ku daray in heshiis kasta oo noocan ah ay tahay in lagu dabaqo mabaadi’ xushmeyneysa xeerarka iyo sare u qaadidda horumar ku wajahan dimqoraadiyadda tartan iyo xisbiyo badan oo ay hesho Soomaaliya.